Mampiely Ny Fahazoana Miditra Aterineto i Kiobà Amin’ny Alalan’ny Fametrahana Ivon-tSerasera · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Jona 2013 17:09 GMT
[Ny rohy rehetra dia mankany amin'ny pejy teny espainola.]
Niteraka adihevitra ihany anefa io endrika fidirana aterineto vaovao nosokafana tamin'ny 4 jona 2013 io.
Karatra Nauta ahafahana miditra aterineto. (Saripika : Cubadebate)
Araka ny didim-pitondrana 182/2013 navoakan'ny minisiteran'ny tetibola sy ny vidin-javatra, mitentina 0,60 peso kiobàna azo avadika sandam-bola vahiny (CUC) isan'ora ny fidirana aterineto nasionaly, 1,50 CUC ho amin'ny seramailaka iraisampirenena, 4,50 CUC ho amin'ny aterineto sy izay rehetra ao aminy.
Heverin'ny bilaogera sasany ho lafo loatra ireo sara ireo tahaka ny nomarihan'i Alejo3399 :
Raha mbola manakaiky ny 5 dolara isan'ora ny miserasera, ny vola no hamaritra izay ho afa-miditra aterineto ary tsy isalasalana fa izay rehetra manana ny fahafaha-manao dia afa-miala voly amin'io fanararaotra vaovao io.
Amin'izany indrindra, manampy i Alejo3399 :
Nolazain-dry zareo fa ny halafon'ny tolotra (zavamisy nekena tamin'ny tsikeratena tahaka ny hoe hanova zavatra izany) dia noho ny harefon'ny fotodrafitrasam-pifandraisandavitra ao amin'ny firenena ka ny sara dia natao hanandratana ny fiseraserana ho an'ny anatin'ny firenena hitaizana ny olona hanjifa amin'ny fomba ao an-toerana.
Na izany aza, misy lahatsoratra navoakan'i Aurelio Pedro izay mampahatsiahy ao amin'ny Progreso Semanal ao :
Angatahan'ny mponina fatratra ny fahazoana miditra amin'ny aterineto ho an'ny olom-pirenena rehetra. Manaiky ny tompon'andraikitra manao io zavatra io fa lafo loatra ny sarany ary mampanantena fa hidina io rehefa ahafaha-manao izany ny toe-draharaha ara-toekarena.
Mizara ny fahatsapan-dry zareo ao amin'ny tambajotra sosialy irey nampiasa voalohany ny tolotra. Toy izany ohatra i Mayle González :
Mametraka ao amin'ny aterineto lahatsary iray maharitra 5 minitra ao Havanna, na dia mpiseran'ny Nauta aza ianao, dia mety haharitra enina ora…
Araka an'i Siomel Savio Odriozola :
Ny misera aterineto ora iray isan-kerinandro, dia mitovy amin'ny fampiasambola 18 CUC isam-bolana, izany hoe 75 % -n'ny salan-karama (na karama amin'ny ankapobeny). Any amin'ny farany izany ny bolsa negra dia hivadika ho “Hueco negro”. Miandry volana maro sisa, na tao maro ihany koa, miandry ny fidinan'ny sara, tahaka izay nitranga tsimoramora tamin'ny finday ihany…
Manohy ny politika ara-tsosialy amin'ny fidirana aterineto i Kiobà izay manome vahana ny serasera maimaipoana eny amin'ny oniversite akademika sy siantifika. Tamin'ny mey 2013, ny minisitra lefitra misahana ny informatika sy ny fifandraisana no nanambara tamin'ny gazetim-pirenena Granma fa « tsy hibaiko ny fanovozam-pahalalàna ny tsena ». Ankehitriny, antenaina sisa fa hidina tsimoramora ny sara ary ho azon'ny isan-tokantrano ny mamandrika ny tolotra ahafahan'izy ireo miserasera hatrany amin'ny misy azy avy.